गजेन्द्रनारायणको पथ र मधेशको राजनीति (विशेष सम्पादकीय)
मधेश आन्दोलन कहिले पनि नटुंगिने यात्रा हो
‘गजेन्द्र नारायण सिंहले जीवन पर्यन्त जुन एजेण्डाका लागि, मधेशी र जनजातिको अधिकारका लागि लडाईं लडे, ती एजेण्डालाई पूरा गराउनु र उनको सपनालाई साकार बनाउनु नै उनीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुनेछ’ नेपालमा मधेश आन्दोलनका प्रणेता, सशक्त अगुवा तथा नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंहको विषयमा मधेशी दलका नेताहरूले यसैगरी उनको मुक्तकंठले प्रशंसा गर्छन् र आफू उनको अनुयायी भएको पनि बताउँछन् तर व्यवहारमा उनीहरू स्वर्गीय सिंहको आदर्श र सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको पाइदैन । यहि यर्थाथ चित्रण हो मधेशको राजनीतिको । स्वर्गीय सिंहलाई आदर्श व्यक्तित्व ठान्ने तर उनको पदचिन्हलाई वेवास्ता गरी राजनीतिक पसल थाप्नेहरूको कमी छैन यहाँ । सिंहको निधन भएको झन्ढै डेढ दशक भयो र उनको नाम राखेर करिब एक दर्जन संस्था पनि खोलिए तर सिंहको स्मरणका लागि र योगदानको चर्चा गर्नका लागि माघ १० गते उनको स्मृति दिवस नै कुर्नु पर्छ । अन्य दिनमा न त उनको चर्चा हुन्छ न त उनको योगदानलाई सही अर्थमा कदर नै गरिन्छ ।
स्व. सिंहले स्थापना गरेका नेपाल सदभावना पार्टीबाट थुप्रैले राजनीतिक यात्रा सुरू गरे पनि अहिले उनीहरूले सिंहलाई बिर्सेर व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिक जोड घटाउमा व्यस्त छन् । स्व. सिंहले जीवनपर्यन्त मधेश र मधेशीका लागि वकालत गरे र अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहे । तर उनले मधेशको आक्रोश उत्सर्गमा पुगेको अनुभव गर्न सकेनन् । उनको निधनपश्चात मधेशले तीनवटा आन्दोलन गरिसकेको छ तर अहिले पनि मधेशी जनता पूर्ण अधिकारसम्पन्न भइसकेको छैन । संविधानका अन्तर्वस्तुमा असहमति जनाउँदै संविधान जारी हुनभन्दाअघिदेखि सुरू भएको मधेश आन्दोलनको अवतरण कसरी भयो, मधेशले नै बुझेको छैन ।
वास्तवमा मधेश आन्दोलन कहिले पनि नटुंगिने यात्रा हो र संविधान निर्माणपश्चात् मधेश आन्दोलन विसर्जन मात्र भएको हो भन्ने एकथरिको विश्लेषण हो । व्यक्ति, समुदाय र समाजको लामो र कठिन संघर्षमा थकान महसुस भएपछि अल्पकालीन विश्राम भएको मात्र हो । मधेश आन्दोलनले दुईवटा कुरा स्थापित गरेको छ–आम मधेशीले काठमाडौंको पहाडे राज्यले ऐतिहासिक कालदेखि आफूमाथि गरेको अपमान बुझ्यो । र दोस्रो, पुरानो नेतृत्वको व्यापक आलोचनासँगै मधेशमा नयाँ नेतृत्वको खोजी भएको छ । तर नयाँ नेतृत्व देखिएको छैन । कारण, मधेशका अहिलेका नेतृत्वले स्व.सिंहको पदचिन्हमा सहि ढंगले चल्न नसक्दा बाटो बिराएको जस्तो छ र परिणमस्वरूप, मधेशले ३÷३ पटक आन्दोलन गरिसक्दा पनि अझै अधिकारको लागि संघर्ष गर्नु नेतृत्व वर्गको कमजोरी नै हो ।
आन्दोलनलाई सहि दिशा दिन नसक्नु, सहि रूपमा नेतृत्व दिन नसक्नु, आन्दोलनको मर्मलाई समय सापेक्ष बुझन नसक्नु, आन्दोलनलाई सत्ताका लागि प्रयोग गर्नु जस्ता कारणले मधेशले बाटो बिराएको हो । मधेश बेगरको नेपाल कसैको पनि कल्पना होइन । नेपालको एकता मधेश आन्दोलनसँग जोडिएको छ । इतिहास र मौलिकतालाई मधेश आन्दोलनले पनि बुझ्नुपर्छ । मधेश आन्दोलन २००७ सालअघि पनि थियो । राणाशासन हटाउने आन्दोलनमा मधेश पनि थियो । छुट्टै आन्दोलन भन्दा पनि नेपालमा हुने गरेका क्रान्ति र आन्दोलनमा मधेश सहभागी थियो । र अहिले मधेशमा चेतना जागृत भयो । उसले आफ्नो पहिचान दह्रोसँग स्थापना गरेको छ ।
सोह्र बुँदे सहमतिसँगै औपचारिक रूपमै सुरू भएको ‘इगो’ र दाउपेच केन्द्रित मधेश राजनीतिका कारण पछिल्लो समय मुलुकमा कायम आपसी सद्भाव, मेलमिलाप, भाइचारामा दरार आएको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ । हिजो एकात्मक केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा देशका विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जातजाति पिछडिन पुगेको यथार्थ एक ढंगले नस्विकारिएको वा बहसमा नआएको होइन । यी समस्याकै बीचबाट आज राज्य पुनर्संरचनाको विषयले स्थान पाएको हो । तर, यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन भने खासगरी ठूला राजनीतिक दलहरू चुकेको देखिन्छ ।